GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Gianni na Maurizio bụ enyi kemgbe ihe dị ka afọ iri ise. Ma, e nwere mgbe nsogbu chọrọ ime ka ha tisaa. Maurizio kwuru, sị: “Mgbe ihe siri ike, m mere mmehie ụfọdụ dị oké njọ, nke mere ka anyị ghara ịdịzi ná mma.” Gianni kwukwara, sị: “Ọ bụ Maurizio mụụrụ m Baịbụl mgbe m malitere ịmụ ihe. Ọ na-enyere m aka n’ọgbakọ. N’ihi ya, ekwetaghị m na ọ ga-eme ihe ahụ o mere. Obi gbawara m n’ihi na ama m na anyị agaghịzi abụ enyi. Ọ dị m ka ụwa ọ̀ gwụla.”
EZIGBO ndị enyi bara uru. Mmadụ abụọ ịbụ enyi ma ghara itisa anaghị eme na mberede. E nwee ihe chọrọ ime ka enyi na enyi tisaa, gịnị ga-enyere ha aka ka ha ghara itisa? Anyị ga-amụta ọtụtụ ihe n’aka ụfọdụ ndị e kwuru okwu ha na Baịbụl, bụ́ ndị bụ́ ezigbo enyi ma nsogbu emechaa chọọ ime ka ha tisaa.
MGBE ENYI GỊ MEJỌRỌ
O doro anya na Eze Devid, bụ́ onye ọzụzụ atụrụ, nwere ezigbo ndị enyi. Jọnatan bụ otu n’ime ha nwere ike ịgbata gị n’obi. (1 Sam. 18:1) Ma, Devid nwere enyi ndị ọzọ, dị ka onye amụma bụ́ Netan. Baịbụl agwaghị anyị mgbe ha ghọrọ enyi. Ma, o nwere mgbe Devid kọọrọ Netan ihe ọ chọrọ ime otú ahụ enyi nwere ike ịkọrọ enyi ya. Devid chọrọ ịrụrụ Jehova ụlọ. Ọ ga-abụrịrị na Devid ejighị ihe Netan gwara ya gwuo egwu n’ihi na Netan bụ enyi ya, bụrụkwa onye nwere mmụọ nsọ Jehova.—2 Sam. 7:2, 3.
Ma, e nwere nsogbu chọrọ ime ka ha gharazie ịbụ enyi. Eze Devid na Bat-shiba kwara iko, Devid emechaa mee ka e gbuo Yuraya bụ́ di ya. (2 Sam. 11:2-21) Kemgbe ọtụtụ afọ, Devid na-erubere Jehova isi, na-ekpekwa ikpe ziri ezi. Ma, o mechara mee mmehie a jọgburu onwe ya. Gịnị mere ezigbo eze a ji mee ụdị ihe a? Ọ̀ bụ na ọ maghị na ihe o mere jọgburu onwe ya? Ò chere na ya ga-ezochirili ya Chineke?
Gịnị ka Netan ga-eme? Ọ̀ ga-asị onye ọzọ gaa gwa eze mmehie ahụ o mere? Ndị ọzọ ma otú Devid si mee ka e gbuo Yuraya. N’ihi ya, gịnị mere Netan ga-eji tinye ọnụ n’okwu ahụ, meekwa ihe nwere ike ime ka ya na Devid ghara ịdịkwa ná mma? Ọ bụrụ na Netan ekwuo, e nwedịrị ike igbu ya. A sị ka e kwuwe, Devid mere ka e gbuo Yuraya na-enweghị ihe o mere.
Ma, Netan na-ekwuchitere Chineke. Onye amụma a ma na ọ gbachi nkịtị, ya na Devid agaghị adị ná mma otú ha dịbu, akọnuche ya ga na-amakwa ya ikpe. Enyi ya bụ́ Devid mere ihe na-adịghị Jehova mma. E kwesịrị inyere Devid aka ka ya na Jehova dịkwa ná mma. N’eziokwu, Devid chọrọ ezigbo enyi. Netan bụ ụdị enyi ahụ. O ji ihe atụ malite okwu ahụ ka o nwee ike ikwu ihe ga-eru Devid bụ́bu onye ọzụzụ atụrụ n’obi. Netan ziri Devid ozi Chineke ziri ya, ma o mere ya otú Devid ga-aghọta na ihe o mere jọgburu onwe ya, ya echegharịakwa.—2 Sam. 12:1-14.
Gịnị ka ị ga-eme ma enyi gị mejọọ ma ọ bụ mee mmehie dị oké njọ? I nwere ike iche na ịgwa ya ihe ọjọọ ahụ o mere ga-eme ka gị na ya ghara ịdị ná mma. I nwekwara ike iche na ị gwa ndị okenye ihe ahụ o mere, bụ́ ndị nwere ike inyere ya aka, ọ pụtara na i meela enyi gị ihe ọjọọ. Gịnị ka ị ga-eme?
Nwanna Gianni anyị kwuru okwu ya sịrị: “M ghọtara na ihe agbanweela. Maurizio anaghịzi akọrọ m ihe otú ọ na-emebu. M kpebiri ịgakwuru ya n’agbanyeghị na o siiri m ezigbo ike. M nọ na-eche, sị, ‘Gịnị ka m ga-agwa ya ọ na-amaghị? O nwere ike wee ezigbo iwe.’ Ma, mgbe m chetara ihe niile mụ na ya mụrụ, m katara obi gaa gwa ya okwu. E nweela mgbe Maurizio si otú ahụ nyere m aka. Achọghị m ka mụ na ya tisaa. Ma, m chọrọ inyere ya aka n’ihi na m hụrụ ya n’anya.”
Maurizio sịkwara: “Gianni kwuru otú ọ dị ya n’obi. Ihe ọ gwara m bụ eziokwu. Ama m na nsogbu m kpataara onwe m esighị yanwa ma ọ bụ Jehova n’aka. N’ihi ya, m nabatara aka ná ntị a dọrọ m, mụ na Jehova adịkwa ná mma ka oge na-aga.”
MGBE ENYI GỊ NỌ NÁ NSOGBU
Devid nwere ndị enyi ọzọ, bụ́ ndị ji obi ha niile na-enyere ya aka mgbe ihe siiri ya ike. Otu n’ime ha bụ Hushaị, onye Baịbụl kpọrọ “enyi Devid.” (2 Sam. 16:16; 1 Ihe 27:33) Ọ ga-abụ na ọ na-eje ozi n’obí eze, bụrụkwa onye ya na Devid na-anọ mgbe niile, onye na-agakwara eze ozi mgbe ụfọdụ.
Mgbe Absalọm bụ́ nwa Devid chụturu nna ya n’ocheeze, ọtụtụ ndị Izrel dụnyeere Absalọm úkwù. Ma, Hushaị emeghị otú ahụ. O so Devid mgbe ọ gbapụrụ. Obi gbawara Devid n’ihi na nwa ya na ụfọdụ ndị ọ tụkwasịrị obi gbara ya mgba okpuru. Ma, Hushaị ahapụghị Devid. Ọ dị njikere ịkụghasị nkata ọjọọ ahụ a kpara n’agbanyeghị na ime otú ahụ nwere ike ịta isi ya. Ihe mere o ji mee ya abụghị naanị maka na ọ na-ejere eze ozi. Ihe o mere gosiri na ọ bụ ezigbo enyi Devid.—2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.
Obi dị anyị ụtọ ịhụ otú ụmụnna anyị taa si dịrị n’otu n’ihi na ha hụrụ ibe ha n’anya, ọ bụghị n’ihi ọrụ e nyere ha n’ọgbakọ. Omume ha na-egosi na ha na-asị: “Ihe mere m ji bụrụ enyi gị abụghị iji mezuo iwu, kama ọ bụ maka na ejighị m gị egwu egwu.”
Ọ bụ ihe otu nwanna aha ya bụ Federico chọpụtara. Ezigbo enyi ya bụ́ Antonio nyeere ya aka mgbe ihe siiri ya ike. Federico kwuru, sị: “Mgbe Antonio gafetara n’ọgbakọ anyị, ọ dịghị anya anyị aghọọ enyi. Anyị abụọ bụ ohu na-eje ozi, jirikwa obi ụtọ na-arụkọ ọrụ. N’oge na-adịghị anya, e mere ya okenye. Ọ bụghị naanị na ọ bụ enyi m, kama ọ na-enyekwara m aka n’ọgbakọ.” Federico mechara mee ihe na-adịghị mma. Ọ gara ozugbo ka ndị okenye nyere ya aka, ma o rughịzi eru ịbụ ọsụ ụzọ na ohu na-eje ozi. Gịnị ka Antonio mere?
Mgbe ihe siiri Federico ike, enyi ya bụ́ Antonio gere ya ntị, gbaakwa ya ume
Federico kwuru, sị: “M chọpụtara na Antonio ghọtara otú ọ dị m. Ọ gbalịsiri ike ịna-akasi m obi. Ọ chọsiri ike ka mụ na Chineke dịkwa ná mma. Ọ hapụghịkwa m. Ọ gbara m ume ka okwukwe m sie ike, ka m gharakwa ịda mbà.” Antonio sịrị: “M wepụtakwuru oge ka mụ na Federico na-anọ. M chọrọ ka obi na-eru ya ala ịkọrọ m ihe ọ bụla, ọ bụrụgodị ihe na-ewute ya.” Okwukwe Federico mechara siekwa ike. Ka oge na-aga, a họpụtara ya ịbụ ọsụ ụzọ na ohu na-eje ozi. Antonio kwuru, sị: “Ọ bụ eziokwu na anyị abụọ anọghịzi n’otu ọgbakọ, anyị dị ná mma karịa otú anyị dịtụrụla.”
Ị̀ GA-ECHE NA ENYI GỊ AGBAALA GỊ MGBA OKPURU?
Olee otú obi ga-adị gị ma ezigbo enyi gị hapụ gị mgbe o kwesịrị inyere gị aka? Ụdị ihe a na-ewe ezigbo iwe. Ị̀ ga-agbaghara ya? Ùnu ga-emecha dị ná mma otú unu dịbu?
Chegodị ihe mere Jizọs mgbe ọ fọrọ ụbọchị ole na ole ka e gbuo ya. Ya na ndịozi ya kwesịrị ntụkwasị obi anọọla ọtụtụ mgbe, ha na ya dịkwa n’otu n’ihi na ha hụrụ ibe ha n’anya. Ọ dabara adaba na Jizọs kpọrọ ha ndị enyi ya. (Jọn 15:15) Ma, gịnị mere mgbe a nwụchiri ya? Ndịozi ya hapụrụ ya gbaa ọsọ. Pita ekwuola hoo haa na ọ gaghị ahapụ Nna ya ukwu. Ma n’otu abalị ahụ, Pita gọnahụrụ Jizọs.—Mat. 26:31-33, 56, 69-75.
Jizọs ma na ọ bụ naanị ya ka ọnwụnwa ikpeazụ ahụ ga-abịara. Ma, ihe ndị na-eso ụzọ ya mere kwesịrị iwute ya, ma ọ bụdị gbawaa ya obi. Ma, okwu ya na ndị na-eso ụzọ ya kwurịtara abalị ole na ole a kpọlitechara ya n’ọnwụ egositụdịghị na o wutere ya, na iwe were ya ma ọ bụ na ọ kwara mmakwaara. Jizọs abịaghị gụsịwa ihe ndị na-eso ụzọ ya mejọrọ, ma nke ha mere n’abalị ahụ a nwụchiri ya.
Kama, Jizọs mesiri Pita na ndịozi ndị ọzọ obi ike. Iji gosi na ọ tụkwasịrị ha obi, ọ gwara ha otú ha ga-esi kwusaa ozi ọma, bụ́ ọrụ kacha mkpa a rụtụrụla kemgbe ụwa. Jizọs ka weere ndịozi ya ka ndị enyi ya. Ha echefughị otú Jizọs si hụ ha n’anya. Ha ga-agbalịsi ike ka ha ghara ime ihe ga-ewute Nna ha ukwu ọzọ. N’eziokwu, ha rụrụ ọrụ ahụ Jizọs nyere ndị niile na-eso ụzọ ya.—Ọrụ 1:8; Kọl. 1:23.
Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Elvira chetara mgbe ya na ezigbo enyi ya bụ́ Giuliana nwere nghọtahie. Ọ sịrị: “Mgbe ọ gwara m na ihe m mere were ya iwe, ahụ́ nwụrụ m. O kwesịrị iwe iwe. Ma, ihe tọrọ m ụtọ bụ na ọ na-echegbu onwe ya banyere m nakwa nsogbu ihe ahụ m mere ga-akpata. Obi dị m ụtọ na o lekwasịghị anya n’ihe ọjọọ ahụ m mere ya, kama o lekwasịrị anya ná nsogbu m na-akpatara onwe m. M kelere Jehova na enwere m enyi na-echere m echiche ọma n’agbanyeghị na m mere ihe were ya iwe.”
N’ihi ya, olee ihe ezigbo enyi ga-eme ma e nwee ihe chọrọ ime ka ya na enyi ya tisaa? O kwesịrị ịdị njikere iji obiọma gwa enyi ya okwu, kwuokwa otú ọ dị ya n’obi. Ụdị enyi ahụ ga-adị ka Netan na Hushaị, bụ́ ndị na-ahapụghị Devid ma mgbe ihe siiri ya ike. Ọ ga-adịkwa ka Jizọs, bụ́ onye gbaghaara ndịozi ya. Ị̀ bụ ụdị enyi a?